Taariikhda webiga Niil iyo dalalka uu maro - BAARGAAL.NET
Taariikhda webiga Niil iyo dalalka uu maro
✔ Admin on June 28, 2013
Webiga niilku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah:
1.1.Niilka cad (white nile)
2.2.Niilka buluuga ah( blue nile)
Niilka cad (white nile)
Niilka cadi wuxuu ka soo bilaabmaa dhawr meelood oo ay ka mid tahay buuraha silsilda ah ee dalka Ruwaanda, dhulka taaga ah ee Burundi Harada figtooriya ee yugaandha, qaybo ka mid ah dhulka Tansaaniya iyo weliba meelo ka midah dalka Koongo. Webiga niilka cad waa webiga ugu biyaha badan uguna dheer. Wuxuu ku darsamaa harooyinka Albert iyo Edward markaasuu u soo dhaqaaqaa dhinacaa iyo dalka koonfurta suudaan.
Markuu soo gaadho halkaasi waxa is-bedela xawaarihii uu ku socday,waxa ku yimaada hoosu dhac weyn. Wuxuu ku faafaa dhul balaadhan oo isku siman. Qaybo ka mid ah biyaha webigu waxay isu-bedelaan uumi waxayna la falgalaan hawada, marka dambana uumigu wuxuu noqdaa roob. Ka dib markuu ka gudbo dalka koonfurta suudaan wuxuu u dhaqaaqaa dalka suudaan, markaasu ku darsamaa webiga buluuga ah (blue nile) meel u dhow caasimada khartuum, ka dib waxay noqdaan niilka weyn (main nile).
Niilka buluuga ah (blue nile)
Niilka buluuga ah wuxuu ka soo bilaabmaa harada Taana ee dalka itoobiya. Wuu ka biyo yar yahay niilka cad, oo sannadkii oo dhan waxa laga helaa biyo yar, mararka qaarkood waxa loogu yeedhaa webiga xagaaga. Sababta magacan loogu yeedho ayaa lagu sheegay inay tahay markuu soo galo wakhtiga xagaagu waxa soo dhaca dabaylo badan oo sababa in dhulka sare ee itoobiya ay roobab badani kada'aan, ka dibna ay biyuhu ku shubmaan niilka buluuga ah, markaasay bataan biyaha webigu. Webigani wuxuu leeyahay magacyo badan, dhinaca itoobiya waxay u yaqanaan Abbai, halka carabtuna u taqaan Al Bahr Al-Azraq.
Markuu soo dhaqaaqo ayuu soo maraa meelo dhawr ah ilaa uu ku darsamo niilka cad meel u dhow caasimada suudaan ee khartuum, intaasi ka dibna wuxuu noqdaa niilka weyn (main nile).
Webiga niilka buluuga ah iyo niilka cad dalalka ka faa'idaysta
Niilka buluuga ah waxa si laxaad leh biyihiisa uga faa'idaysta dalka masar. 60% ayaa lagu sheegaa inay biyahaasi gaadhaan dalka masar. dalka suudaan waxay si weyn uga faa'idaystaan layrka oo 80% layrka dalka suudaan waxay ka dhaliyaan biyaha webiga iyo weliba wax soo saarka beeraha saxaraha ka yaalla. Waxay ka beeraan cudbi, gallay, qamadi iyo khudaarta.
Webiga niilka buluuga ah waxa ka faa'idaysta dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar. niilka buluuga ah biyahiisu waa ka khilaafka ka abuuray dalalka itoobiya iyo masar.
Niilka cad ( white nile)
Niilka cad waxa si weyn uga faa'idaysta biyihiisa dalalka Ruwaanda, Tansaaniya, yugaandha, koonfutrta Suudaan iyo Suudaan. Waxay uga faa'idaystaan beerista beeraha iyo ciida madow ee nafaqadu la socoto. Dalalkan qaarkood waxay ka beeraan cudbida oo ay adduunka u dhoofiyaan.
Dalalka uu maro webiga niilka weyni (main nile)
Markay isku darsamaan labada webiee niilka buluuga ah iyo niilka cadi waxay gaadhaan dalka Masar ka dib waxay ku darsamaan badda midhitaraeenkan.
Dalalka uu maro : Koongo, Ruwaanda, Tansaaniya, yugaandha, koonfurta Suudaan, Suudaan iyo Itoobiya.